» पौडी खेल्न नजान्ने यी युवा यसरी १३३ दिन एक्लै समुद्रमा बाँच्न सफल भए,को हुन् यी युवा? पौडी खेल्न नजान्ने यी युवा यसरी १३३ दिन एक्लै समुद्रमा बाँच्न सफल भए,को हुन् यी युवा? – हाम्रो खबर
पौडी खेल्न नजान्ने यी युवा यसरी १३३ दिन एक्लै समुद्रमा बाँच्न सफल भए,को हुन् यी युवा?
एजेन्सी । पौडी खेल्न नजान्ने चिनियाँ नागरिक पुन लिम बीईएम १ सय ३३ दिन समुद्रमा ए¥क्लै बाँचेको कुराले मानिसलाई आश्चर्य बनाउँछ । तर उनी भाग्यले बाँचेका थिए । उनी दोस्रो विश्व यु द्धका बेला बेलायती पानीजहाजमा स्टोरकिपरको काम गर्थे।
सन् १९४२ नोभेम्बर २३ मा जर्म¥नद्वारा सो पानीजहाजमाथि आ क्र म ण गरी डुबाइयो। उक्त पानीजहाज के¥प टाउनबाट सुरिनाम जाँदै थियो। जसमा ५३ मानिस सवार थिए। तीमध्ये पुन लिम मात्रै बाँचे। सन् १९१८ मा चीनमा जन्मिएका उनी पौडिन पनि जान्दैन थिए। जहाज बि स्फो ट हुनुभन्दा अगाडि नै उनले लाइफ ज्याकेट लिएर समुद्रमा हाम फालेका थिए।
पानीमा उनले करिब ८ स्क्वा¥यर फिटको एउटा र्‍याफ्ट फेला पारे। त्यहाँ केही खानेकुरा र अलिकति पानी थियो। केही दिनमा त्यो पनि सकियो। त्यसपछि उनले लाइफ ज्याकेटमा वर्षात्को पानी जम्मा गर्न थाले। टर्चलाइटबाट तार नि¥कालेर माछा मा र्ने बल्छी तथा खाना प्याकिङमा प्रयोग भएका टिनबाट च क्कु बनाए। उनी माछा मा रे र आफ्नो गुजारा गर्दै उद्धारको प्रतीक्षामा थिए।
एकपटक समुद्री आँधीले जम्मा गरेको पानी तथा माछाहरू न ष्ट गरिदियो। त्यसपछि एउटा चरालाई मा रे र त्यसको र ग तबाट तिर्खा मेटाए। त्यही चराको मासु चाराका रूपमा प्रयोग गरी एउटा सार्क माछा मा रे र आफ्नो ज्या¥न जोगाए। अन्ततः ५ अप्रिल १९४३ मा उनलाई ब्रा¥जिलको तट नजिकबाट माछा मा र्ने ले उद्धार गरे।
पुन लिमले लाइफ र्‍याफ्टमा समुद्रमा बिताएको समयका लागि विश्व रेकर्ड राखेका छन्। बेला¥यत फर्किएपछि रा¥जा जर्ज छैटौंले उनलाई ब्रिटिस साम्राज्य पदक प्रदान गरे। आफ्नो विश्व रेकर्डको टिप्पणी गर्दै लिमले भनेका छन्, ‘मलाई आशा छ कि कसैले यो रेकर्ड तो ड् नु पर्दैन।’
“विना काम सौराहाको, ठण्डीमा, झुलाइयो, के हो बन्द्सत्र अलपत्र, – दुर्गा प्रसाईं”